Tranonkala misy loko miloko gradient UI | Famoronana an-tserasera
Tranonkala misy paleta miloko UI gradient
Rehefa mandeha ny fotoana ny gradient dia mahavita mahazo toerana bebe kokoa ao anatin'ny famolavolana tranonkala, izany no antony hiresahantsika amin'ity lahatsoratra ity momba izany, mba hahamora anao.
Raha efa teo amin'ny tontolon'ny famolavolana tranonkala nandritra ny taona vitsivitsy ianao na raha mitandrina ny rehetra fanovana efa novolavolain'ny endrika mandritra ny taona maro, mety ho tsapanao fa ny loko gradient Niverina izy ireo ary tsara lavitra noho izay azontsika taona vitsy lasa izay. Tsy misy fampandrenesana ary tampoka dia toy ny hoe niverina niaraka tamin'ny zava-drehetra ilay gradien, satria miseho hatraiza hatraiza, ao amin'ny endrika UI UI.
Ny gradient dia ao anatin'ny fironana famolavolana tamin'ny taona 2017Na izany aza, tsy manao izany amin'ny fomba nampiasana azy teo aloha, fa amin'ny fomba voadio sy kanto kokoa.
Noho izany, mba hanampiana anao hahita ny gradient tsara ho an'ny tetikasanao manaraka Ho an'ny famolavolana tranonkala, asehonay aminao ireo tranonkala telo izay manome paleta miloko mavitrika mahatalanjona.
WebGradients dia misy tranokala maimaim-poana, izay misy paleta miloko maherin'ny 180 Gradients-tsipika izay nanjary tsara tarehy sy manintona kokoa noho ny hafa ary azontsika ampiasaina tsy misy olana.
Ny hevitra tsara dia:
Manana kaody HEX izy io.
Mety ho an'ny tranonkala izany, satria asehoy ny kaody CSS3 vonona tanteraka handika amin'ny pejin-tranonkalanao.
Izy io dia manana PNG.
UiGradients nivadika tranokala mitovy amin'ny WebGradients, izay koa manana palette miloko mavitrika sy miovaova ary ampiasaina amin'ny fomba mitovy ihany koa.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny uiGradients sy WebGradients dia mitoetra ao amin'ny hoe samy manana ny mpampiasa azy fahafaha-mamorona gradient anao manokana ary amin'izany fomba izany dia afaka mandray soa amin'izany ny olon-kafa.
Izy io dia mampiseho ny kaody CSS vonona tanteraka hadika sy hapetaka amin'ny mpampiasa.
Avelao ny mpampiasa hamorona gradientany manokana.
Ao amin'ny Blend, manana ny fahafahan'ny mpampiasa mampiasa hazavao amin'ny alalany fa tsy ny lokony ihany fa ny gradients ihany koa amin'ireo. Ity tranonkala ity dia miasa toy izao: misafidy loko roa ianao, kitiho ianao "Mifangaro" ary voila, vonona ny gradient.
Tena mora ampiasaina izy io, mahatonga azy io hojerena haingana.
Mampiranty ny Kaody CSS toy ny hafa ihany, vonona tanteraka ny mpampiasa handika sy hametaka.
Izy io dia manana endrika fampisehoana radial sy tsipika.
Tranonkala telo azontsika antoka hahazo tombony lehibe ianao amin'ny endriny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Tranonkala misy paleta miloko UI gradient
Fandraisana Serif maimaim-poana ho an'ny volana Aogositra